#Somaliland: Waa Maxay sababtaXukuumaddu Uga Qayliso Baraha Bulshada (Social Media)? - #1Araweelo News Network
Haddaba, waxa isweydiin mudan, maxaa sababay in xukuumaddu xilligan dareento saamaynta Baraha bulshadu leeyihiin iyo khatarta ay horseedi karaan.?
Maxaa sababay In aan sidii waayo loo danayn jiray goobihii warar iyo xoggaha laga soo xigan jiray, sida Marreegaha wararka laga bowsan jiray ee Websites, Jaariiradaha, ama Wargeysyada?
Dhowrkii sanno ee u dambeeyey xukuumadda Somaliland waxay si badheedh ah u baabiisay marreegihii wararka sugan loo doonan jiray hadday tahay Websites iyo Wargeysyadii la daabacayay, islamarkaana waxay abaabushay oo dhiiri-galisay in lagu ku tartamo Faysbuug iyo wax-ku-baahintiisa, taasina waxay sababtay in war-tebiyayaashii ka hawl-galayey warbaahinta kala duwan la tartamaan hay’addii warbaahineed ee ay ka shaqaynayeen.
Xukuumadda rabitaankeegu ma in aan saxaafad jirin baa? Mise waa in keliya la baahiyo wixii ay jeceshahay?
Dhinaca kale, Baraha bulshada oo barkulanka Faysbuug ugu tun weyn yahay, dalalka caalamku waxay u sameeyeen xeerar, qawaaniin iyo xadayn meel ku sar-go’an, mana cadaadiyaan saxaafadda sida togan u baahinaysa wararka xaqiiqada ku fadhiya, balse waxaad mooddaa in xukuumadda Somaliland lid ku tahay dhammaan meelaha ay iska taageen dowladdaha dunida ka jiraa arrimaha.
Guntii iyo gebabadii, waxaan leeyahay waa lagama maarmaan in la helo war car iyo bay la’ oo waaqaca ku aroora, sidii lagu heli lahaana waxa mudan in la dhiirri-geliyo suxufiga iyo saxaafadda, maadamaa saxaafadu door weyn kasoo qaadatay horumarka iyo dhismaha qarankan, isla markaana tahay awood aan la dafiri karin oo mararka qaar loo yeedho Awoodda Afraad, marka laga hadlayo dunida dimuqraadiga ah.